. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: ချစ်ခြင်း တစုံ
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/11/2012 12:47:00 PM
ရှည်လိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းး .. :D
ဖတ်ရင်းနဲ့ ပြီးပြီလို့ ထင်ရင်းထင်ရင်းနဲ့ ....း))
I like the story very much....
ဖတ်လို့ကောင်းတယ်။ ထပ်ရေးပါဦးး)
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ.....ဖတ်နေရင်း သူတို့နှစ်ယောက် ကွဲသွားမလား စိုးရိမ်နေတာ...၊
ဟုတ်ပါ့ မိုးနတ်လဲဇာတ်သိမ်းက happy ending
ပျော်စရာ ဇာတ်လမ်းနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတာ ကျေးဇူးပါဘဲ
ဖတ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာရတာပေါ့လေ ဟုတ်ဘူးလား..
မနေ့ကပထမဆုံးဖတ်ပြီးကွန်းမန့်ချန်တာ ဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးချန်လို့ကိုးမရဘူး မကျေနပ်လို့တစ်ခေါက်ပြန်လာတာကြိုက်တယ်း))
အဲလိုလေးနဲနဲဆင်တူတစ်ပုဒ်ရေးလက်စတန်လန်းတောင်ဖြစ်နေသေးတယ် ခိခ်ိး)
ဇာတ်လမ်းအိမ်လေးက ကြိုမှန်းလို့မရပေမယ့် ဇာတ်ပေါင်းခန်းမို့ ကျေနပ်သွားတယ် မိုးခါးရေ။ ရှင်ကွဲ သေကွဲ ဇာတ်လမ်းမျိုးဖတ်ပြီးရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်တတ်လို့ပါး)
ဇာတ်သိမ်းမှာ ကွဲလိုက်မလားဆိုပြီး ကြောက်ကြောက်နဲ့ဖတ်နေရာက ဇာတ်သိမ်းရောက်တော့........မို့ ပျော်သွားတယ်။း)